Wararka - Ha i weydiinin waa maxay filimka POF ee kuleylka yareyn kara, hoos ma kuugu sheegayaa?
Filimka kuleylka-yareyn kara ee POF wuxuu la kulmaa isticmaalka weel-xirmooyinka baakadaha cusub ee leh qaabab kala duwan. Filimkan aan sunta lahayn, urta lahayn, dufanka u adkaysta, iyo filimka u hoggaansamaya nadaafadda cuntada ayaa u oggolaanaya naqshadeeyayaasha in ay isticmaalaan midabbo indhaha soo jiita si ay u gaaraan naqshad calaamadeysan 360 °. Sii ciyaar buuxda hal-abuurka iyo male-awaalka, sidaa darteed cabitaanka iyo badeecooyinka kale waxay sifiican ugu muuqdaan adeegsiga calaamadda, muuji sawirka sariirta, soona saaraan saameyn weel lama filaan ah. In warshadaha filimka yareyn kara ee POF, shirkaddu waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa saamiga suuqa gudaha iyo kaalinta labaad ee saamiga suuqa adduunka.
Waxyaabaha filimka kuleylka yareyn kara ee POF waxaa loo qeybin karaa seddex qaybood: POF filim caadi ah, POF filim iskutallaab ku xiran, iyo POF waxqabad sare leh sida ku xusan isticmaalka iyo hababka gaarka ah. Waqtigan xaadirka ah, dakhliga iibka ee shirkadda iyo faa'iidada guud ee saddexda nooc ee wax soo saarka ah ayaa ka badan 95% Sare waa isha ugu weyn ee dakhliga iyo faa'iidada shirkadda. 2016Q1, sababo ay ka mid yihiin hoos u dhaca qiimaha alaabta ceyriinka, waxsoosaarka guud ee waxsoosaarka shirkadda ayaa kordhay. Rubucii ugu horreeyay, waxay ku heshay faa'iido saafi ah 20,265,600 yuan oo loo aaneyn karo waalidka, koror sanad-sannadeed ah 268.15%.
1) PE-kuleylka-kuleylka kuleylka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhammaan baakadaha shirkii ee khamriga, gasacadaha, biyaha macdanta, cabitaannada kala duwan, dharka iyo alaabada kale. Badeecaddu waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan, saameyn ku caabbinta, iska caabbinta ilmada, mana sahlana in la jebiyo. , Kama cabsaneyso mowjadda, heerka yaraanshaha weyn;
2) Filimka PVC wuxuu leeyahay astaamaha hufnaanta sare, dhalaalka wanaagsan iyo yaraanshaha sare;
3) POF wuxuu leeyahay astaamaha dhalaalka dusha sare, adkaanta wanaagsan, caabbinta ilmada ee sarreysa, yaraanshaha kuleylka isku midka ah oo ku habboon baakadka xawaaraha sare ee otomatiga ah. Waa badeecad beddel u ah filim dhaqameedka PVC ee kuleylka yareyn kara. POF macnaheedu waa filim kuleylka yareyn kara. POF wuxuu u taagan yahay filim lakabyo badan oo iskudhafan oo polyolefin ah. Waxay u isticmaashaa polyetylen-cufan hooseeya oo toosan sida lakabka dhexe (LLDPE) iyo co-polypropylene (pp) sida lakabyada gudaha iyo dibedda. Waa la balaastiigay oo laga soo saaray mashiinka, ka dibna lagu farsameeyay habab gaar ah sida dhimista sameynta iyo sicir bararka filimka.
Si fudud loo kiciyo oo loo shaqeeyo. Adag adag, xoqitaan hoose, ayaa loo isticmaali karaa baakadaha otomaatiga ah ee khadadka wax soo saarka xawaaraha sare leh. Nidaamka wax-soo-saarka ee PVC wuxuu soo saari doonaa arrimo kacsan, oo si fudud u keeni kara dhaawac farsamo, waana sahlan tahay in lagu dhejiyo usha daboolka, taas oo aan ku habboonayn shaqada oo ay adag tahay in la ilaaliyo. 5. Badbaadada ka dib markay POF yaraato baakadaha, afarta gees ee shaabadu way jilicsan yihiin, gacmaha dadkana ma goynayaan, waxayna u adkeysanayaan xoqida. Ka dib marka baakada ay yaraato PE, afarta gees ee shaabaddu way jilicsan yihiin mana gooyaan gacmaha aadanaha. Kadib baakadaha hoos udhaca PVC, afarta gees ee shaabaddu waa adagyihiin oo fiiqan yihiin, Furaan fudud iyo dhiig bax. 6. Ilaalinta deegaanka iyo fayadhawrka POF ma aha sun, ma soo saaro ur sun ah inta lagu guda jiro howsha, wuxuuna la kulmaa heerarka US FDA iyo USDA. PE ma aha sun, ma soo saarto gaaska sunta ah inta lagu jiro howsha, waxayna la kulantaa heerarka US FDA iyo USDA. PVC waa sun, soosaaridduna waxay soo saari doontaa ur iyo gaas sun ah, waana tartiib tartiib.
Filimka OPS ee soo yaraanaya (polytyrene oriented) filimka kuleylka kuleylka ah waa nooc cusub oo baakidh ah oo leh qalab kuleylka kuleylka kuleylka ah oo buuxinaya shuruudaha ilaalinta deegaanka. OPS kuleylka kuleylka kuleylka wuxuu leeyahay awood sare, qalafsanaan sare, qaab deggan, iyo dhalaal wanaagsan iyo daahfurnaan. Ka shaqaynta habboon, midabaynta fudud, waxqabadka daabacaadda wanaagsan, iyo xallinta daabacaadda aadka u sarreeya. Calaamadaha ganacsiga ee sida joogtada ah u daba socda daabacaadda wanaagsan, gabi ahaanba waa horumar xagga qalabka. Sababtoo ah yaraanshaha iyo xoogga filimka OPS, waxay si dhow ugu habboonaan kartaa weelasha qaabab kala duwan leh, sidaa darteed ma daabacan karto oo keliya qaabab wanaagsan,
Polyolefin Pof Shrink Film, Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Iskudhin Duubista Filimada, Yaree Filimka PCv, Duubista Polyolefin Pof,